LEGO Super Mario နှင့်စကားပြောရန်အခွင့်အရေးရမလား။ block ဒီဇိုင်နာများ
18 / 10 / 2021 18 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 247 Views စာ0မှတ်ချက် 71395 Super Mario 64 လား။ ပိတ်ပင်ခြင်း, ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block, Benjamin Lundquist Ma၊, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာများ, Lego စူပါမာရီယို, Lego VIP, LEGO VIP အမှတ်များ, Lego VIP ဆုလာဘ်များ, Lego VIPS, Pablo Gonzalez Gonzales, စူပါမာရီယို, စူပါမာရီယို 64, တင်ရေး, VIP, vip အချက်များ, VIP ဆုများ, VIP ဆုပေးစင်တာ, VIP လှူဒါန်းခြင်း
သစ်တစ်ခုအကွာအဝေး Lego စူပါမာရီယို ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောခွင့်အပါအ ၀ င် VIP အွန်လိုင်းဆုများကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ထည့်လိုက်သည်။
ဆက်လက်ယင်း Lego Group မှ partကျွန်ုပ်၏ Nintendo နှင့်လက်တွဲပါအထူးဆုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက် VIP ဆုလာဘ်ပေါင်းများစွာကိုထည့်ထားသည် ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block My Nintendo နှင့် the နှစ်ခုစလုံးတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်နောက်ခံပုံအမျိုးမျိုးနှင့် VIP ဆုပေးစင်တာ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွင်မော်ဒယ်၏ဒီဇိုင်နာများနှင့်သီးသန့်ဆွေးနွေးရန်အနိုင်ရသည့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
VIP အမှတ် ၅၀ အတွက်သင်နောက်ကွယ်မှတီထွင်ဖန်တီးလိုစိတ်တစ်စုံဖြစ်သော Pablo Gonzalez Gonzalez နှင့် Benjamin Lundquist Ma တို့နှင့်စကားပြောနိုင်ပါသည်။ ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block.
ဤဆုမဲသည်အပြင်တွင်ဖြစ်သည် Lego Ideas Fender Stratocaster ထီပေါက်ခြင်း။ အောက်တိုဘာလ၌လည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်။ ဂီတဆုမဲနှိုက်ကဲ့သို့ပင် VIP အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး လျှင်အများဆုံး ၅၀ ဦး ကိုအောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဆုအတွက်ဖော်ပြချက်သည်အနိုင်ရသူခုနစ် ဦး ကိုအခွင့်အလမ်းအတွက်ရွေးချယ်လိမ့်မည်၊ အရှည်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်း p ကိုယူရန်ရွေးချယ်ခံရသူတိုင်းအားလက်မှတ်ထိုးပိုစတာတစ်ခုပေးမည်ဟုအတည်ပြုသည်။art.
Lego စူပါမာရီယို ၇၁၃၉၅ Super Mario 71395 Question Mark Block ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် set ဖြစ်သည် Lego အုပ်စု partNintendo နှင့်အတူ လက်တွဲ၍ ၎င်းမှရည်ညွှန်းချက်များစွာပါ ၀ င်သည် classic ဂိမ်း၊ တစ်ခုအပါအ ၀ င် scavenger အမဲလိုက်ခြင်း ၎င်းသည်အသိပညာလိုအပ်သည် အရှိန်ပြေးခြင်း.
← LEGO Adidas NBA အဝတ်အစားများနှင့်သင်တန်းဆရာအသစ်များထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
LEGO Collectible Minifigures Series 22 အတွက်ကောလာဟလဖော်ပြချက်များ →